Gooyo Gooyo | February 2020
Ugu Weyn Ee Gooyo Gooyo
Manjooyin manjooyin: shuruudaha, talooyinka, muuqaalada
Hadafka beerta kasta waa inuu helo miro wanaagsan. Laakiin si loo gaadho tan, waa lagama maarmaan in si fiican loo shaqeeyo. Ku dhowaad ninkii beerta ka shaqeeya ee ku yaala goobta wuxuu leeyahay geed dabacsan. Carruurta iyo dadka waaweynba waxay jecelyihiin inay ku raaxaystaan ​​miraha. Xajirku waa la xiray, lowska ayaa la sameeyey, malabkuna wuxuu leeyahay sifooyin caafimaad.
Qof kastaa wuu ogyahay sida daboolka u eg yahay. Tani waa dhirta ugu jecel ee bannaanka u ah si aad u wanaagsan oo caafimaad leh oo dhadhan fiican leh. Waxay leedahay sifooyin faa'iido leh, hodan ku ah macdanta iyo fitamiinada. Saxarka daboolka waxaa ku jira potassium, fluorine, sodium, borotiinka, fiyuusta cuntada, carbohydrates, fitamiin B1, B2, C, E, iyo PP. Isticmaalka plomme ayaa ka helay dawadiisa.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Gooyo Gooyo 2020